Nchoputa ohuru nke nwoke mbu na saịtị ndi njem nlere nke Olduvai Gorge
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Nchoputa ohuru nke nwoke mbu na saịtị ndi njem nlere nke Olduvai Gorge
omenala • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Olduvai Gorge bụ isi ihe na-eme njem nleta ebe ndị ọbịa nwere ike ịmụ banyere mmalite mmadụ na prehistory. Ebe ahụ na ụlọ ngosi ihe nka ọhụrụ na-adọta ndị njem nleta na mba na mba ụwa ịbịa leta ma hụ ihe ọ dị ka ibi ndụ dịka nwoke mbụ biri.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta ihe ochie na ndị na-amụ banyere ihe mgbe ochie achọpụtawo nnukwu nchịkọta nke afọ abụọ nke ngwá ọrụ okwute, ọkpụkpụ ọkpụkpụ, na ihe ọkụkụ na Olduvai Gorge dị n'ebe ugwu Tanzania.
Nkume ohuru ohuru n’egosiputa na ndi mbu jiri uzo di iche-iche ma gbanwee ngwa ngwa n’Africa iji bido ndu n’elu uwa. Kemgbe ihe dị ka nde afọ abụọ na narị afọ isii gara aga, ọ ga-abụrịrị na ọ bụ ụmụ mmadụ mepụtara ngwá ọrụ ndị ọhụrụ ahụ. Olduvai akpiri bụzi igodo Tanzania Ebe nlegharị anya ebe ndị ọbịa nwere ike ịmụ banyere mmalite mmadụ na prehistory.
Ebe a dị mkpa na-ekpughe na ndụ mmadụ nke oge mbụ na-ekpughe na ha biri n'oge ochie n'etiti anụ ọhịa anụ ọhịa na-eme ihe ike na gburugburu ebe obibi Africa n'oge ndị ahụ mmalite mmalite mmadụ. Ihe nchoputa ohuru a tinyere itinye ihe ndi ozo na ihe anumanu nke umu anumanu di iche iche na ebe a na-egwu egwu, na-enye ihe akaebe na mmadu mbu biri n’etiti umu anumanu gburugburu mmiri.
Nnyocha e mere na nso nso a na-ekpughe na ọdịdị ala, mmiri mmiri, na ahịhịa gbanwere ngwa ngwa n'Africa, na-enye ihe akaebe nke ịdị adị nke ụmụ mmadụ mbụ nwere ụzọ ndụ mbụ na ụwa ịmalite na kọntinent a.
Ebe a na-egwupụta ihe ochie bụ Olduvai bụ ebe ndị njem nlegharị anya na-adọta ndị njem nleta na ndị mba ọzọ ịbịa leta ma hụ ụdị ọ dị ka ibi ndụ dịka nwoke mbụ mere. Discovery nke Hominid-anọgide ụbọchị laghachi 1.75 nde afọ gara aga.
Saịtị a bụ obere ọwa mmiri nke dị ihe dị ka kilomita iri anọ na otu n’ebe ugwu nke ama ama Ngorongoro, ebe ndị ama ama ama ama ama ama amụrụ na Britain bụ Dr.
A na-echekwa Museumlọ Ahịa Olduvai nke nwere ihe echekwara nke nwoke mbụ ahụ.
Mary Leakey chọpụtara na July 17, 1959, okpokoro isi nke nwoke mbụ ahụ ha kpọrọ Zinjanthropus boisei. Nchọpụta ya okpokoro isi nke nwoke mbụ a n'elu ụwa bụ nke ihe karịrị nde 1.75 afọ gara aga. Na 1960, Louis Leakey chọtara ọkpụkpụ aka na ụkwụ nke nwoke dị afọ iri na abụọ nke ọ kpọrọ Homo habilis. Dr. Louis Leakey nwụrụ na 12, mana nwunye ya Mary gara n'ihu na nchọta ọhụụ na Olduvai. N’afọ 1972, Mary chọpụtara akara ụkwụ mmadụ na mbụ na Laetoli dị nso na Olduvai, na ndịda Olduvai Gorge.
Nnukwu igwu ala na Olduvai Gorge gosipụtara ebe ahụ bụ ụlọ obibi mbụ nke nwoke ochie, Maazị Godfrey Ole Moita, onye na-ahụ maka ọdịnala ọdịbendị nke Ngorongoro Conservation Area Authority, kwuru.
Ebe a tupu akụkọ ihe mere eme gbatịrị ihe dị ka kilomita 50 site na Lake Ndutu ruo Olbalbal Depression ma dị omimi 90 n'ime Northern Northern. Ebe a na-egwupụta ihe bụ mpaghara nkume nke akọrọ, nke giraff, wildebeest, ịnyịnya ọhịa, mgbada, agụ owuru, na ọdụm mgbe ụfọdụ na anụ ọhịa ndị ọzọ, gụnyere anụ na-akpụ akpụ na nnụnụ gbochie.
E gwupụtakwala ọkpụkpụ hominids nke agbụrụ Homo nke gụnyere Homo habilis, Homo erectus, na Homo sapiens na Olduvai, yana narị narị ọkpụkpụ ndị ọzọ emere ọkpụkpụ na ngwa okwute ndị malitere kemgbe ihe karịrị nde atọ gara aga. Ngwuputa Olduvai na nyocha emeela ka ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ kwubie na mmadụ ma ọ bụ ụdị mmadụ malitere n'Africa, dị ka Ole-Moita si kọọ.
Ulọ ihe nkiri Olduvai Gorge na-egosiputa ọtụtụ ihe ochie na ngwa okwute nke ndị nna ochie hominid tinyere ọkpụkpụ ọtụtụ anụmanụ ndị lara n'iyi gwupụtara na ọmarịcha ahụ. Ọ bụ Mary Leakey guzobere ụlọ ihe ngosi nka ma ọ raara ya nye ekele na nghọta nke saịtị ochie nke Olduvai na Laetoli. Ewezuga ihe ngosi dị na ebe ngosi ihe nka, enwere ebe a na-akụzi ihe n’èzí ebe ndị na-eme ihe ngosi nka na-enye ndị ọbịa nlezianya. N'ebe ngosi ihe mgbe ochie ahụ, mmadụ nwekwara ike ịhazi njem nlegharị anya na akpiri.
Ihe ndekọ ihe ochie nke achọtara na Olduvai Museum kpuchiri ihe ndị mebiri emebi ihe dị ka nde afọ 4, ọkachasị site na mmalite mmalite nke mmalite mmadụ. Ihe ndekọ ndị a, gụnyere nke mbụ akara ụkwụ mmadụ, dị ihe dị ka nde afọ 3.5. A na-echekwa Hominid na Museum Museum malite na 2 nde ruo afọ 17,000. E gwupụtala ihe dị ka ụdị anụmanụ 7,000 na-apụ n'anya na ọmarịcha ahụ. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ kwubiri na nwoke mbụ ma ọ bụ mmadụ malitere na Olduvai wee kwaga ebe ndị ọzọ n'ụwa.
Mary Leakey ochie Land Rover site na ebe a na-egwupụta ihe ugbu a ka echekwara na ihe ngosi nka ọhụrụ. Ga ileta Olduvai Gorge na ụlọ ihe ngosi nka bụ ahụmịhe ndị njem na-eme otu oge.